FAUCI Kiiska Taleefanka Jeermiska Hawada (nadiifiye hawo gaar ah)
Qalabka FAUCI AAPG (oo ku jira FAUCI Case Disinfection Air Case) oo lagu horumariyey teknolojiyadeena lahaanshaha, ayaa si firfircoon u sii deyn kara walxaha jeermiska dila oo aan ku jirin kiiska taleefanka, laakiin sidoo kale hawada ku xeeran, si dhakhso loogu tirtiro bakteeriyada waxyeellada leh iyo fayrasyada sida fayraska hargabka , formaldehyde, iwm.
Wax dhib ah uma laha jidhka bini'aadamka sida lagu caddeeyey imtixaanka SGS oo si fiican loo aqoonsaday ee heerka FDA. Sidaa darteed, waxay gacan ka geysaneysaa joojinta gudbinta hawada ee bakteeriyada iyo fayraska oo ah sababta ugu weyn ee faafitaanka COVID-19.
Kiiskeena Taleefoonka Disinfection-ka gaarka ah kaliya ma ilaalin karo taleefankaaga gacanta, laakiin sidoo kale wuxuu ilaalin karaa caafimaadkaaga, gaar ahaan xilliga hargabka iyo xilligan faafa ee COVID-19.
Deodorizer & Freshener qaboojiyaha FAUCI waa badeecad saamayn gaar ah oo si gaar ah loogu isticmaalo qaboojiyeyaasha si kor loogu qaado dhawrista cuntada cusub iyo ka saarida urta halaagga.
Ka dib markaad furto oo aad geliso qaboojiyaha dhawr saacadood, waxaad si gaar ah u ogaan doontaa urta aan fiicnayn ee ur kasta oo qaboojiyaha ku jirta ay gabi ahaanba meesha ka baxday. Isla mar ahaantaana, waxaad ogaan doontaa goor dambe, cuntadu waxay sii ahaataa mid cusub muddo dheer.
Waxaa caddeeyay hay'adaha imtixaanka awoodda leh-waa badbaado, aan sun ahayn oo aan ka-soo-horjeedin. Isla mar ahaantaana, ma soo saarto wax ozone ah, sidaa darteed, runtii waa badbaado iyo bay'ad u wanaagsan.
Mashiinka Nadiifinta Hawada ee FAUCI wuxuu ka kooban yahay si gaar ah lakabka qalabka jeermiska hawada FAUCI AAPG Qalabka aan annagu si gaar ah u soo saarnay. Qalabku wuxuu awood u leeyahay inuu si firfircoon u sii daayo walxaha jeermiska dila, si dhakhso ah u baabi'iya fayrasyada waxyeellada leh sida fayraska H1N1, fayraska hargabka, formaldehyde, iwm.
Wax dhib ah uma laha jidhka bini'aadamka sida lagu caddeeyey imtixaanka SGS oo si fiican loo aqoonsaday ee heerka FDA. Sidaa darteed waxay ka caawisaa joojinta gudbinta hawada ee bakteeriyada iyo fayraska. Makiinaddeena Hawada Faafisa ayaa si gaar ah wax uga qabata welwelka dadka ee ku saabsan gudbinta hawada ee fayrasyada xilliga hargabka iyo masiibadan.
Robot -ka Faafiye Hawada ee FAUCI, kaas oo isdhexgalxaaqidda dhulka, shaqooyinka qashin -qubka boodhka iyo sidoo kale fayadhowrka iyo hawlaha jeermiska hawada, waa kii ugu horreeyey ee noociisa ah. Waxaa loogu talagalay xarumo waaweyn oo gudaha ah sida suuqyada dukaamaysiga, gegida diyaaradaha, saldhigyada tareenka, hoteelada, iwm. Walxaha jeermiska jeermiska hawada ayaa awood u leh inay si firfircoon u sii daayaan walxaha, si dhakhso ah uga tirtiraan fayrasyada waxyeellada leh sida fayraska hargabka, formaldehyde, iwm.
Wax dhib ah uma laha jidhka bini'aadamka sida lagu caddeeyey imtixaanka SGS oo si fiican loo aqoonsaday ee heerka FDA. Sidaas darteed Robotku wuxuu caawiyaa xannibaadda gudbinta hawada ee bakteeriyada iyo fayraska taas oo ah sababta ugu weyn ee faafitaanka COVID-19. Waqtigan xaadirka ah Robotkayagu wuxuu bixinayaa kaalintiisa u gaarka ah dagaalka ka soo kabashada ganacsiga ee masiibada adduunka oo dhan.